Mohamed Olad Oo Si Buuxda U Faahfaahiyey Hadalkii Jemal-Dirie Ee Sida Khaldan Loo Turjumay - Jigjiga Online
HomeSomalidaMohamed Olad Oo Si Buuxda U Faahfaahiyey Hadalkii Jemal-Dirie Ee Sida Khaldan Loo Turjumay
Mohamed Olad Oo Si Buuxda U Faahfaahiyey Hadalkii Jemal-Dirie Ee Sida Khaldan Loo Turjumay
Jigjiga (JigjigaOnline) – Lataliyaha madaxweynaha DDS ee arrimaha saxaafadda Mudane Maxamed Muxumed Colaad ayaa sharraxaad ka bixiyey hadallo ka mid ahaa waraysi uu bixiyey Jemal-Dirie Kalif oo loo turjumay si khaldan.
Qoraal uu bartiisa Facebook ku baahiyey ayaa Maxamed Colaad uu kusoo koobay waraysiga uu Jemal-Dirie Kalif siiyey idaacadda DW Amharic, kaas oo dad badan ku tilmaameen inuu ka dhan ahaa ciidamada gaarka ah ee Liyuu Booliska deegaanka Soomaalida.
Lataliyaha Arrimaha saxaafaddu, waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay:
“Waxaa maal mahan Facebook dhax wareegayay warar kutidhi ku teen ah oo si khaldan u turjumaya dood ku saabsanayd ciidamada gaarka ah ee deegaanada oo ka baxday DW Amharic taasi oo uu ka qayb qaatay Jemal-Dirie Kalif, Lataliyaha Madaxweynaha ee dhinaca sharciga iyo xuquuqul iinsaanka.
Waxaa nasiib daro ah in bogag warbaahineed ay si khaldan oo gabi ahaanba ka duwan sidii uu hadalka u yidhi Mudane Jemal-Dirie Kalif iyo ka qayb galayaasha kale ba ugu turjumaan shacabka Soomaaliyeed ahna mida keentay hadal hayn badan iyo dood adag oo bulshada dhaxdeeda ah.
Hadaba, qormadan iyo qormoda tan ku xigta kaga bogo sidii saxda ahayd ee uu hadalka u yidhi Jemal-Dirie iyada oo qoraal ah iyo iyada oo maqal ah (waa cidii fahmaysa af axmaarigee).
Isaga oo ka jawaabaya su’aasha ku aadan sharciga ay ku aas aasan yihiin ciidamada booliska gaarka ah ee deegaanadu waxa uu yidhi Jemal-Dirie sida tan:
‘Wakhti xaadirkan meel Liyu Police (Ciidanka Gaarka ah) ku aas aasan yahay oo xeernimeed gaar ahi majiro. Sharciyan waxa ay ku aas aasan yihiin xeernimaadkeeda uu booliska ku aas aasan yahay oo ay sharciyana ay hoostagaan iyaga oo hadana sii hoos taga hogaanka nabad galyada. [Hadaba xeer nidaameed kaa ay ku aas aasan yihiin] ma ahan dhibaatadu ee waa hanaanka qaab dhismeedkooda hogaamineed; khaasatan markii laga hoos saaray hogaamintooda Koomishinka booliska caadiga ah oo ah meesha ay sharciyan ku hoos aas aasan yihiin’.
Xubinka kale ee ka qayb qaadanayay dooda oo lagu magacaabo Abebe sida waxa uu ku jawaabay ma ahan mid ka gadisan sida uu Jemal Diriye ka dhawaajiyey. Abebe waxa uu sheegay in ‘deegaanadu hay’adaha amni ee kala duwan ay xuquuq dastuuri ah u leeyihiin inay sida iyaga la quman u aas aasaan’. Jemal Diriye na jawaabtiisu mid taasi la mid ah hasayeeshee si kale uga jawaabaysa ayay ahayd.
Jemal waxa uu yidhi sidatan: ‘Liyu Police sifo sharci ah ayuu ku aas aasan yahay, hasayeeshee uu yahay uun waax ka mid ah booliska deegaanka ee aanu jirin xeernidaameed si gaar ah oo booliska deegaanka ka madax banaan oo uu ugu aas aasanyahay ciidanka Booliska Gaarka ah ee deegaanku’.
Hadaba waxaa xusid mudan in si fudu loo fahmi karo sida labadaasi su’aalood iyo jawaabahooduba toona aanay ahayn kuwa is burinaya ee ay yihiin caksideeda kuwo is dhamaysitiraya. Hadiise ay jirto ka qayb galayaasha doodani cid si buuxda ama si toos ah aan uga jawaabin su’aalaha, waa ninka magiciisu yahay Abebe oo aan ka jawaabin su’aasha la weydiiyey ee ahayd sifo sharci oo caynkee ah ayayay ciidamada booliska gaarka ah ee deegaanadu ku aas aasan yihiin. Isaga oo ka jawaabaya taasi, ayaa waxa uu kaga jawaabay inay deegaanadu xaq u leeyihiin inay ciidamada kala duwan ee amniga deegaanada suga kara ay u samaysan karaan sida iyaga la haboon.
Hasayeeshee, Abebe waxba ka ma odhan in ciidamada gaarka ah ee deegaanadu haatan hanaan sharci ah ku aas aasan yihiin iyo in kale. Waxa uu xusay kaliya qodobada dastuuriga ah ee awood u siinaya deegaanada inay ciidamo samaysan karaan iyada oo su’aasha iyo dooduba ku saabsanayd xeer nidaameedyada khaaska ah ee ku saabsan ciidamada deegaanada ee gaarka ah ee aanay dastuur ahayn.